ပုခုံးနာခြင်းသက်သာစေမယ့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ၅ မျိုး - Hello Sayarwon
ကျန်းမာရေးစင်တာ » အရိုးနဲ့ကြွက်သားကျန်းမာရေး
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win | ရေးသားသူ Dr. K Zin Thwe
သင်သည် ရုံးမှာ တနေကုန် တနေခမ်းထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရသူဖြစ်ပါသလား။ သင်သည် ခွဲစိတ်ကုသမှုများ ခံယူထားသောကြောင့် သင့် ပခုံး၂ဖက်ကို အနေအထားမှန်အောင်ကြိုးစားနေရပါသလား။ သင်သည် နှစ်ရှည်လများ လေ့ကျင့်ရသော တင်းနစ်ကစားသမား တစ်ဦးဖြစ်ပါသလား။
ထိုသို့သော အခြေအနေများတွင် ပခုံးနာခြင်းသည် ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပခုံးနာခြင်းကို သက်သာစေရန် အောက်ပါဆန့်ထုတ်လေ့ကျင့်ခန်းများကို ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
စက်ဝိုင်းပုံလှည့်ခြင်းဖြင့် သင့်ပခုံးရှိကြွက်သားများကို ပူနွေးလာစေပါသည်။
ပထမဦးစွာ သင့်လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးမှာချပြီး မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပါ။
လက်ဖဝါးကို အောက်ဖက်သို့ မျက်နှာမူပြီး လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို ကြမ်းပြင်နှင့် ရေပြင်ညီ အနေအထားဖြစ်အောင် မြှောက်လိုက်ပါ။
ထို့နောက် ၈ စင်တီမီတာခန့်အကျယ်ရှိသော စက်ဝိုင်းအနေအထားအတိုင်း လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို လှည့်ပါ။
တူညီသော ဦးတည်ဖက်အတိုင်း ၁၀ ခါလှည့်ပါ။
ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ ၁၀ ခါလှည့်ပါ။
ထို့နောက် စက်ဝိုင်းပုံအကျယ်ကို အနည်းငယ်ချဲ့ပြီး အထက်ပါအတိုင်း ၁၀ ခါစီလှည့်ပါ။ စက်ဝိုင်းတစ်ခုသည် ၅၀ စင်တီမီတာခန့် ကျယ်သင့်ပါသည်။ ထိုအနေအထားနှင့် သင့်ပခုံးကို နာကျင်စေပါက စက်ဝိုင်းအကျယ်ကို လျှော့နိုင်ပါသည်။
ထိုလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ရန် သင့်တင်ပါးများနှင့် အမြင့်တူညီသည့် ထိုင်ခုံတစ်လုံး လိုအပ်ပါသည်။
ပထမဦးစွာ သင်သည် ထိုင်ခုံနှင့် လက်တကမ်းအကွာတွင် ရပ်လိုက်ပါ။
ထို့နောက် ထိုင်ခုံနောက်မီကို လက်ဖြင့် ထိရောက်အောင်ကိုင်ပါ။
သင့်ကိုယ် အပေါ်ပိုင်းကို အရှေ့ဘက်သို့ ကုန်းလိုက်ပါ။ ကိုယ်အောက်ပိုင်းကို နှိမ့်ချပြီး ပခုံများကို ဆန့်တန်းထားပါ။ ထိုအခါ ပခုံကြောများတင်းလာသည်ကို သင်ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်လက်မောင်းများ၊ ခေါင်း၊ လည်ပင်းနှင့် ကျောပြင်ကို တဖြောင့်တည်းထားပါ။ ထိုအနေအထားတွင် သင်သည် အနောက်ဘက်သို့ ခြေတစ်လှမ်း နှစ်လှမ်းနောက်ဆုတ်နိုင်ပါသည်။
ထိုအနေအထားအတိုင်း ၁၅ စက္ကန့်မှ စက္ကန့် ၃၀ အထိနေပါ။
နောက်ဆုံးအထားမှ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး အကြောများကို ဖြေလျှော့ထားပါ။
သင်သည် အနောက်ဖက်သို့ ခြေလှမ်းများဆုတ်ထားလျှင် ပြန်စရန် အရှေ့ဘက်သို့ ပြန်လှမ်းပါ။
ထိုသို့ဆန့်ထုတ်ခြင်းကို ၂ ကြိမ်မှ ၄ကြိမ်အထိ ထပ်ခါပြန်လုပ်ပါ။
ရင်ဘတ်နှင့် ပခုံးများကို ဆန့်ထုတ်ခြင်း
ထိုလေ့ကျင့်ခန်းကို စလုပ်ရန် မတ်မတ်ရပ်ပါ။ သို့မဟုတ် မတ်မတ် ထိုင်နေပါ။
မေးစေ့ထားပါ။ သင့်ခေါင်းကို ကိုယ်၏အနောက်ဖက်ဦးတည်ရာသို့ စောင်းလိုက်ပါ။
တံတောင်ဆစ်များကို ကွေးပြီး လက်မောင်းများကို မြှောက်လိုက်ပါ။ လက်ဖဝါးများကို အရှေ့ဘက်သို့ မျက်နှာမူထားပါ။ ထိုအနေအထားတွင် သင့်လက်များသည် နားများနှင့် တပြေးညီဖြစ်နေရပါမည်။
အသက်ကို ဖြေးဖြေးရှုသွင်းကာ သင့်တံတောင်ဆစ်များကို အောက်သို့ လျှောချပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ကျောနောက်တွင်ထားလိုက်ပါ။ ထိုအနေအထားတွင် ရင်ဘတ်နှင့် ပခုံးကြောများ ဆန့်နေသည်ကို ခံစားရပါလိမ့်မည်။
ထိုအနေအထားအတိုင်း ၆ စက္ကန့်မျှနေပါ။ ထိုအချိန်တွင် အသက်ကို ပုံမှန်ရှုနိုင်ပါသည်။ ၁၀ စက္ကန့်ခန်းအနားယူလိုက်ပါ။
ထို့နောက် အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ၆ကြိမ်မှ ၈ ကြိမ် ပြုလုပ်ပါ။
ထိုလေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ရန် တံခါးပေါက်တွင် မတ်မတ်ရပ်ပါ။
လက်တစ်ဖက်ကို မြှောက်ပြီး တခါးတဖက်ရှိ နံရံမှာ ထောက်ထားပါ။ လက်ဖဝါးများက နံရံကိုထိထားပြီး လက်ကို အပေါ်ဖက်သို့ ဦးတည်ထားပါ။ သင့်တံတောင်ဆစ်များသည် ပခုံးများ၏ အပေါ်ဘက်သို့ရောက်နေပါစေ။
အရှေ့ဘက်ကို ကုန်းပါ။ ထိုအခါ ရင်ဘတ်နှင့် ပခုံးကြောများ ဆန့်နေသည်ကို ခံစားရပါလိမ့်မည်။
ထိုအနေအထားအတိုင်း ၁၅စက္ကန့်မှ စက္ကန့် ၃၀မျှနေပါ။
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ၂ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ် ပြုလုပ်ပါ။
နောက် လက်မောင်း တဖက်ကိုလည်း အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြုလုပ်ပါ။
ထိုလေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ရန် အနောက်ဖက်တွင် အိတ်ကပ် ၂လုံးပါသော အားကစားဘောင်းဘီကို ဝတ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင့် လက်တစ်ဖက်ကို အနောက်ဖက်ရှိ ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲသို့ ထည့်ပြီး မတ်မတ်ရပ်ပါ။ ထိုအနေအထားတွင် ပခုံးကြောများ ဆန့်နေသည်ကို ခံစားရပါလိမ့်မည်။
အခြားလက်တစ်ဖက်က တံတောင်ဆစ်ကို ကွေးပါ။ ထို့နောက် လက်ကို ကျောပစ်ပြီး လက်ဖဝါးများကို အပြင်ဘက်သို့ မျက်နှာ မူထားပါ။
လက်တစ်ဖက်ကို ၂ ကြိမ်မှ ၄ကြိမ်အထိ ထပ်ခါပြန်လုပ်ပါ။
အချုပ်ဆိုရသော် သင်သည် ပခုံးနာကျင်ခြင်းဝေဒနာများကို ခံစားရနိုင်ပါသည်။ ထိုဝေဒနာများသည် အန္တရာယ်မရှိသော်လည်း သင့်ကို စိတ်ဒုက္ခဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါ လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အနာသက်သာရန်ဆေးများသောက်ခြင်းဖြင့် နာကျင်မှုများကို သက်သာစေမည်ဖြစ်ပြီး ပိုဆိုးလာခြင်းမှလည်း ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်သည် ထိုလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိလိုသည်များ၊ သင့်နာကျင်မှုဝေဒနာနှင့် ပတ်သက်ပြီး သံသယများရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Dynamic Shoulder Stretches. http://www.livestrong.com/article/123635-dynamic-shoulder-stretches/. Accessed March 21, 2017.
Shoulder Pain and Common Shoulder Problems. http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00065. Accessed March 21, 2017.
Stretches to Ease Shoulder Aches and Fatigue. http://www.webmd.com/fitness-exercise/stretches-to-ease-shoulder-fatigue. Accessed March 21, 2017.
Overhead Stretch for the Shoulders. http://www.webmd.com/fitness-exercise/overhead-stretch. Accessed March 21, 2017.
Exercise for the Shoulder. http://www.webmd.com/fitness-exercise/posterior-stretching-exercise. Accessed March 21, 2017.
Up-the-Back Stretch for the Shoulder. http://www.webmd.com/fitness-exercise/up-the-back-stretch. Accessed March 21, 2017.
ကင်ဆာနာကျင်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
နာတာရှည်နာကျင်မှုဝေဒနာ သောကကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ
နာတာရှည် နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကို ခံစားနေရသူတို့အတွက် မိမိ၏ ကိစ္စများကို စီမံခန့်ခွဲရမည့် နည်းလမ်းများ
သင့်အိမ်ထောင်ဖက်၏ နာကျင်မှုဝေဒနာများကို သက်သာအောင် ဘယ်လိုကူညီပေးမလဲ
နာကျင်မှု နှလုံး စိတ်ဖိစီးမှု အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း ပျော်ရွှင်ခြင်း ကျန်းမာခြင်း ဟော်မုန်း စိတ်ခံစားမှု စိတ်ဖိစီးမှု ကိုယ်ခံစွမ်းအား
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ ဇူလိုင် 21, 2020 .2mins read
တရားထိုင်တယ် အလေ့အထလေး စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာစေတယ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှလုံး နှလုံးခုန်နှုန်း သွေးလည်ပတ်မှု နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ကိုယ်ခံအား
စိတ်ကျန်းမာရေး, စိတ်ဖိစီးမှုဖြေလျှော့ခြင်း ဇူလိုင် 16, 2020 .2mins read
ပျော်ရွှင်မြူးထူးစွာ Zumba ကကြမယ်
Gym လေ့ကျင့်ခန်း Zumba ကိုယ်အလေးချိန် ကြွက်သားတွေ နှလုံးကျန်းမာရေး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အနေအထား သွေးတိုး ကျန်းမာတဲ့ နေထိုင်မှု ပုံစံ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း
ကျန်းမာစေမည့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများ, နှလုံးကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းများ ဇူလိုင် 2, 2020 .3mins read
အူအတက်ရောင်ရာကနေ အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့အခါ အူအတက်ပေါက်သွားနိုင်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ လက္ခဏာတွေကို သေချာသိရှိဖို့လိုပါမယ်။
အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေး, အခြားအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းပြဿနာများ ဇွန် 4, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 14, 2020 . 1 min read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 19, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇူလိုင် 30, 2020 .2mins read